गायन प्रतियोगितामा भोटिङ सिस्टम ठिक कि बेठिक | Jukson
भनिन्छ संगीतको कुनै भाषा हुदैँन, कुनै सीमा वा घेरामा मात्र पनि सिमित रहदैँन । संगीतलाई सुचना आदानप्रदानो माध्यम पनि मानिन्छ । संगीतको क्षेत्रमा स्वर सम्राट नारायण गोपाल, भजन शिरोमणी भक्तराज आचार्य, अरुण थापा अरुणा लामा जस्ता श्रष्टा जन्माइसकेको नेपाली संगीत क्षेत्रले आजको दिनसम्म आईपुग्दा थुप्रै प्रतिभावान गायकयागिका पाईसकेको छ । जस्को चर्चा देश देखि विदेशसम्म छ । पछिल्लो समय सोसल मिडियाले गर्दा नेपाली गायकयागिकाको चर्चा विश्वभर नै हुने गर्दछ । यही नाम र प्रसिद्धि कमाउने उद्देश्यलले थुप्रै नयाँ नेपाली गायकगायिकाहरु नेपाली संगीत क्षेत्रमा आउने क्रम बढ्दो छ । र यी नयाँ गायकगायिकाहरुलाई प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ, नेपाली गायक प्रतियोगिता अर्थात् रियालिटी शो हरुले । जस्ले अवसरको साथसाथै चर्चित पनि बनाउँ छ । पछिल्लो समय नेपाल भित्रिएको सिङ्गगिङ्ग रियालिटी शो नेपाल आईडलले नेपालभर र नेपाली रहेको विभिन्न देशहरुमा घुम मचाएको छ । तर यस्तासिङ्गगिङ्ग कम्पिटिसन अथवा रियालिटी शोहरुलाई एउटा गम्भीर ओराप पनि लाग्दै आइरहेको छ । त्यो के भने यस्ता कार्यक्रमहरुले साँच्चिकै प्रतिभावान गायकहरुलाई नभई पैसा भरमा चर्चित बन्न खोज्नेहरुलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यसैप्रसङ्ग हामीले पोखराका संगीतकर्मीहरुलाई के तपाईलाई नेपाल आईडल अथवा नेपाल आईडल जस्तो सिङ्गगिङ्ग रियालिटी शो वा कम्पिटिसनहरुले सच्चा प्रतिभालाई माथि उठाउन टेवा पु¥याएको छ भनी सोधेका छौँ ः—
१. योगेशकाजी विसी – गीतकार तथा संगीतकार )
रिलियालिटी शो को एउटा पाटो हेर्ने हो, भने राम्रो पनि छ । किनकी रियालिटी शो अलि छिटो हुन्छ । जुन मान्छेले वर्षै रियाज गरेर, साधना गरेर आईरहेको हुन्छ, त्यो भन्दा छिटो चाँहि रियालिटी शो । तर सबै रियालिटी शो सबै प्रतिभालाई उनीहरुको गन्तव्यसम्म पु¥याउन नसकेको अवस्था छ । अर्को कुरा रियालिटी शो नाफामुखी पनि हुन्छ । विना लगानी रियालिटी शो हुदैँन र लगानी कसैले कसैलाई घरबाट पैसा ल्याएर रियालिटी शो गरेर कुनै कतै बसिरहेको सिङ्गरलाई या कुनै आर्टिसलाई्, कुनै प्रतिभालाई उसले लगेर आईडल बनाउनु पर्छ या नेपालकै टप सिङ्गर बनाउनुपर्छ या उसको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाँहि छैन । तर रियालिटी शोले एउटा आर्टिसमा हौसला थपिदिन्छ भने अर्को तर्फ पछिल्लो किसिमको यो भोटिङ सिस्टममा हाम्रो जातको भनेर भोट गर्ने, हाम्रो वर्गको भनेर भोट गर्ने, हाम्रो भेगको भनेर भोट गर्ने, यो फलानो जातको, यो फलानो जातको, आफ्नो जातकोलाई सपोट गर्नुपर्छ भनेर छरपस्ट देखिएको छ र पछिल्लो समयमा एकदमै जल्दोबल्दो अवस्थामा देखिएको नेपाल आईडल, जुन चाँहि उउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्ल्याटफम हो । नेपाली संगीत उद्योगको लागि नेपाल आईडल जस्तो प्ल्याटफम भनेको एकदमै ठूलो प्ल्याटफम हो । यसलाई सबैले स्विकारेका छन् भने हामीले पनि स्किारेका छौँ । हुन त कुनै पनि रियालिटी शो को एउटा अनुसुचि, विषयवस्तु क्राईटएरिया हुन्छ । जो प्रतिभा त्यहा जान्छ एग्रिमेन्ट गरिसकेको हुन्छ । पब्लिकले हेर्दाखेरी सतही पाराले पनि हेनुृ हुदैँन । हुन त निर्णायक जोखिएको पनि होला । सबै निर्णय निर्णायकले गरेको पनि सहि मानिदैँन, यो बाध्यता छ । किनभने निर्णायकको नै निर्णय भने पनि विभेद हुन सक्छ, मन परेको भन्ने हुन सक्छ, भित्र कतै उसले निर्णायकलाई खुसी पारेको हुन सक्छ टेबल मुनीबाट भन्ने हुन सक्छ । त्यो बच्न को लागि प्राय जसो रियालिटी शो ले टप टेन सम्म निर्णायकले दिएको नम्बरको आधारमा टप टेन सम्म लैजाने त्यसपछाडि जनतालाई छोडदिने भन्निछ । त्यो जनतालाई छोडदिदा खेरी अहिले समस्या के भयो भने जातियवाद नातावाद, कृपावाद, भेगवाद हाबी भएको हामीले देखिरहेका छौँ । तर रियालिटी शो ले नै कलाकार जन्माउँछ र रियालिटीले नै नेपाली संगीतलाई धान्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन । किनभने इतिहास नै साँची छ । एकाधले नै नेपाली संगीतलाई धान्नुभएको छ जो रियालिटी शो बाट आउनुभएको छ तर सबैले गर्नुभएको छैन् । रियालिटी शो हुनुपर्छ । रियालिटी शो ले गर्दा नयाँ पुस्ताले अवसर पाइरहेका छन् । रियालिटी शो ले एउटा प्ल्याटफम दिन्छ त्यो प्ल्याटफमलाई उपयोग गरेर अगाडी जान सकिन्छ ।
२. गायक विनोद वानिँया – गायक )
सवैप्रथम त कुनै पनि रियालिटी शो हुनु राम्रो कुरा हो । तीनै कार्यक्रमका माध्यमबाट हामीले थुप्रै प्रतिभाहरु पनि पाउँछौँ । यो कार्यक्रमको विशेषता पनि हो । जहाँ सम्म कार्यक्रम गर्ने वित्तिकै कतिपयले आरोप पनि लगाउने गर्नुृ हुन्छ पैसा मात्रै कमाउनको लागि कार्यक्रम गर्न लागेको भन्ने कतिपयको सोच पनि हुने गर्छ । कुनै पनि कार्यक्रम गरिन्छ, त्यसको आफ्नै सिमा हुन्छ । कुनै पनि कार्यक्रम गरिसकेपछि नामको पछाडी दामको कुरा अवश्य पनि आउँछ । त्यो भन्दैमा भोटिङ सिस्टमको कुरा आउला, भोटिङ गर्न पाउनु पर्छ ।तर मलाई के लाग्छ भने राम्रो आर्टिस पाउनको लागि राम्रो प्रतिभा पाउनको लागि भोटिङ सिस्टम सायद राम्रो होइन् । म भोटिङ सिस्टमको विरोधीमा छु । तर कहिले काँही कस्तो हुन्छ भने भोटिङसँगसँगै कार्यक्रमको एउटा चार्म पनि आउन सक्छ । भोटिङ सिस्टम नै राख्नप¥यो भने निर्णायकहरुलाई पावर दिनुपर्दछ । पोखरामा हुने विग आईकmको कुरा गनेृ हो भने ६० प्रतिशत निर्णायकको पावर हुन्छ भने ४० प्रतिशत भोट पावर हुन्छ । भोटिङसँगसँगै निर्णायकको पावर भएको हुनाले राम्रो प्रतिभा बाहिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर भोटिङमा जस्ले क्यापेनिङ्ग गर्छ, पैसा खर्च गर्छ त्यसले गर्दा राम्रो प्रतिभा बाहिरिन पनि सक्छ । आजकल जातियताको कुरा पनि आउँछ, यदि राम्रो प्रतिभा रोज्नु छ भने जातियताको कुरालाई आउन दिन हुदैँन । राम्रो प्रतिभा बाहिर जान नदिन कार्यक्रमममा थुप्रै निर्णायकहरु राख्ने गरौँ । र त्यहाँबाट निर्णायकहरुले निर्णय गरेको आधारमा राम्रो प्रतिभा रोज्न सकिन्छ । भोटिङ गरिन्छ जहाँ उम्मेदवारहरु हुन्छन् तर कलामा भोटिङ राम्रो चिज हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
३. भाष्करध्वज श्रेष्ठ – मेन भोकलिष्ट, डिमर्चा व्याण्ड )
अहिले जति नि रियालिटी अथवा कम्पिटिसनहरु भैरहेको छ त्यो नयाँ पुस्ताहरुको लागि एउटा अवसर पनि हो । तर जुन सिस्टममा जान पर्ने त्यो गलत बाटोमा गइरहेको छ । जस्तो यति टिकट बेच्नुपर्ने, यति टिकट बेच्यो भने यति राउण्डमा पुग्न सकिने नत्र सेलेक्ट नहुने जुन आयोजकहरुले गरिरहेका छन् त्यो राम्रो होइन् । यस्तो तरिकाले नयाँ पुस्तालाई प्रोत्सहन दिनको सट्टा नकारात्मक सोच पारिदिन्छ । भोटिङ सिस्टमले राम्रो प्रतिभा अगाडी बढ्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ । यतिसम्म हुन्छ कि प्रतियोगिले पैसाको चलखेल गरेर विजेता बनेको प्रतियोगिताहरु पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ । त्यसैले अब सिस्टममा जानु पर्छ । सरकारले पनि यसमा चासो दिन आवश्यक छ । किनभने जुनसुकै एउटा संस्था बन्यो अनि संस्था नै पिछे कम्पिटिसन ग¥यो । हुदाँहुदा नामै नपाएर जे पनि नाम गइरहेको छ । त्यसले खासै सकारात्मक सन्देश बजारमा गइरहेको छैन् । प्रतियोगिता हुनु राम्रो तर यसलाई सरकारले नै कडा रुपमा अगाडी लैजानुपर्छ ।
४. विवेक श्रेष्ठ – गायक, कन्दरा व्याण्ड –
रियालिटी शोहरुले प्रतिभा भएकाहरुलै राम्रो अवसर दिएको छ । तर जब हामी विजेताको कुरा गर्छैँ । कतिपय राम्रो प्रतिभा हुदाँहुदा पनि विजेता बन्न नसक्ने धेरै ज्वलन्त उदाहरणहरु हामीहरुले देखिरहेका छौँ त्यो चाहे नेपालमा होस् या विदेशमा । त्यसको कारण भनेको भोटिङ हो । भोटिङको पनि म कुनै खण्डन गर्न चाहान्न् । किनकि कुनै पनि विजनेस ईन्टरप्राईजले विजनेस गर्छु भनेर आईसकेपछि उनीहरुले कुनै समाजसेवा गरेको होइन् । उनीहरुले आफ्नो फाईदालाई पक्कै पनि हेर्छन् र त्यो हेर्नु पनि पर्छ । तर मलाई यसमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेको जस्ले भोटिङ गर्छ किनभने उनीहरुले जातिय, वर्गिय क्षेत्रिय रुपमा भोटिङ गरिदिदा, एउटा रियल ट्यालेन्टलाई भोटिङ नगरिदिदा जसरी हामीले एउटा नेता चुन्छौँ, थाहा हुदाँहुदै पनि हामी पार्टीको पछि लागेर पार्टीलाई जिताउँने जुन हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ नेपालमा । मेरो विचारमा सिङ्गगिङ्ग कम्पिटिसन वा रियालिटी शो मा पनि हामी त्यहि गरिरहेका छौँ । यसमा कुनै पनि ठीक वा वेठिक भन्ने छैन्, यो एउटा अभ्यास हो । रियालिटी शोहरुले रियल ट्यालेन्टहरुलाई प्ल्याटफम दिइरहेको छ म त्यसमा सहमत छु तर जस्ले रियल ट्यालेन्टलाई भोट नगरि अरुलाई भोट गर्छन् त्यो नराम्रो हो । जस्ले यस्तो खाने शो हरु गर्नु हुन्छ उहाँरुलाई मेरो कुनै गुनासो छैन । विजनेसको रुपमा आउनुभएको हो, यदि समाजसेवा भनेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । विजनेस गर्न पाउनुपर्छ, उहाँले कसैलाई फोर्स गरेर भोट गर भनेको पनि होइन् । त्यसमा आयोजकलाई केही भन्न चाहान्न तर जस्ले भोट गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई सोच विचार गरेर रियल ट्यालेन्ट जो छ उसलाई भोट गर्न म आग्रह गर्दछु । अन्यथा जो कम्पिटिसनमा दोस्रो तेस्रो बन्न भएको छ उहाँले राम्रो गर्दै जानुभएको छ त्यसको मतलव हामीले सही व्यक्तिलाई भोट गरेका छैनौँ ।
५ कर्णदास ( गायक )
यस्ता रियालिटी शो ले नयाँ प्रतिभालाई प्ल्याटफम प्रदान गर्छ । तर कतिपय रियालिटी शो मा हामीले सोचेको जस्तो सही व्यक्ति छनोट नभएको पनि हामी देख्छौँ । कतिपय ठाउँ भोट निर्णायक र आयोजकहरुबाट गल्ती भएको पनि सुनिन्छ, जस्ले गर्दा जुन आउनुपर्ने कलाकार हो, सही कलाकारको सही मुल्याङ्कन नभएको हो कि भन्ने हामीले थुप्रै व्यक्ति, सोसलमिडिया, फेसबुक, नेटवर्क र समाचारहरुमा देख्छौँ । यी रियालिटी शो हरु धेरै राम्रो हो, आज धेरै प्रतिष्पर्धाबाट नयाँ कलाकारहरु आएका छन् । हामी पनि त्यस्तै प्रतियोगिताका उपज हौँ । भोटिङ सिस्टम राम्रो तर सही ढङेगले व्यापारिक दृष्टिकोणले नभइकन सही मुल्याङ्कन गरेर, एक व्यक्ति एक भोट ग¥यो भने राम्रो हुन्छ । दुई चारवटा निर्णायक मण्डल बनाएमा पनि सही मुल्याङ्कन हुन्छ । जति पनि शो हुन्छन्, त्यसमा सही मुल्याङकन, सही निर्णय, सही जजमेन भयो भने जति नयाँ पुस्ता आउनुहुन्छ छुट्टै खालको धार लिएर आउनुहुनेछ ।
टेलिकमका टावर अब जंगलमा मात्र राख्न पाइने